Janakpur News - Page 29 of 36 - Trending News Portal of Nepal
यस्तो पो रहेछ, बीमाले लगानीकर्ता तान्नुको कारण
March 20, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका02,087
काठमाडौं, चैत ६ । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने हल्लासँगै आइतबार नेप्सेमा बीमा समूहमा ३६७ दशमलव ४९ अंंकको वृद्धि भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा पुगेको सो सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढेको अपुष्ट खबरले लामो समयपछि नेप्सेमा ठूलो अंकको वृद्धि देखिएको हो । बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी अत्यन्तै कम …
सुरु भयो फलामखानीमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रक्रिया
March 20, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका079
पर्वत, चैत ६ । दक्षिण पर्वतको फलामखानी गाविसमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी भएको छ । जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गतको एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा फलामखानीमा हावाको चापबाट बिजुली निकाल्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको हो । प्रारम्भिक चरणमा स्थलगत अध्ययन र स्थानीयवासीसँग छलफल गरिएको केन्द्रका सौर्य वायु …
अलिबाबाको वितरण केन्द्र मलेशियामा पनि
March 20, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका084
काठमाडौं, चैत ६ । विश्व प्रख्यात चिनिया अनलाइन कम्पनी अलिबाबा ग्रुप होल्डिङ लिमिटेडले मलेशियामा वितरण केन्द्र खोल्ने भएको छ । अलिबाबाको व्यापारमा वृद्धि हुनथालेपछी कम्पनीले दक्षिण एशियाको बजारलाई केन्द्रीत गरेर वितरण केन्द्र खोल्न लागेको हो । उक्त खोल्न लागेको कम्पनीबारे आगामी हप्तानै घोषण गर्ने भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् …
नेपालगञ्जमा मञ्जुश्रीको आठौं शाखा
March 20, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका074
बाँके, चैत ६ । मञ्जुश्री फाईनान्स लिमिटेडले आठौं शाखा कार्यालय बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित सुर्खेत रोडमा सुरु भएको छ । फाईनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष निरौलाले शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा मुख्य कार्यालय रहेको यस फाईनान्सको नारायणगढ–चितवन, न्युरोड–काठमाडौं, बुटवल–रुपन्देही, धनगढी–कैलाली, ईटहरी–सुनसरी तथा बिराटनगर–मोरङमा शाखाहरु रहेका छन् । रु. …
‘कन्चनपुर घटना नियोजित, भारतले नेपालीलाई गोली हानेको छैन’ : छानबिन गर्नुपर्छ राज्यसभा सदस्य
March 20, 2017	ओनलाईन पत्रिका, राजनीति0121
काठमाडौं, चैत ६ । भारतको भारतीय जनता पार्टीका राज्यसभा सदस्य गोपालनारायण सिंहले कञ्चनपुर घटना नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिगार्न चाहने असामाजिक तत्वले गराएको हुनसक्ने बताएका छन् । आइतवार राजधानीमा यही चैत २८ देखि वैशाख ४ गतेसम्म भारतको हरिहरनाथदेखि मुक्तिनाथसम्म सांस्कृतिक यात्रा(२०१७ का लागि नेपाल आएका नेता सिंहले नेपालसँग भारतले गोली चलाउनुपर्ने कुनै …
प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा मन्त्रीको आग्रह
March 20, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0100
काठमाडौं, चैत ६ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रतिफल दिने गरी सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । दक्षिण कोरियामा आज नेपाली समुदायसँग गरिएको विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको हितमा नै ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा अगाडि सारिएको बताए । …
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप संसदबाट अस्वीकृत
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका045
अमेरिकी सीनेटले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको फोन ट्यापिङ गराइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासनद्वारा चुनाव प्रचारका क्रममा आफ्नो फोन निगरानीमा राख्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । उक्त आरोप सीनेटको जासूसी मामला हेर्ने कमिटीले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको हो । ट्रम्प टावरमा चुनाव पूर्व …
शेयर कारोबारीलाई राहत, थपिए तीन क्लियरिङ बैंक
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0265
काठमाडौं, चैत ४ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लि.ले थप तीन वटा बैंकलाई क्लियरिङ्ग बैंकको रुपमा थप गरेको छ । क्लियरिङ्ग बैंकका रुपमा थप गरिएका बैंकहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंक लिमिटेड रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । यसअघि ग्लोबल आईएमई बैंक मात्रै क्लियरिङ बैंक रहेको शेयर …
अमेरिकी घरजग्गामा चिनियाँको ओइरो
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0125
अमेरिकाको रियलइस्टेटमा गत वर्ष भएको लगानीमा चिनियाँको संख्या सर्वाधिक देखिएको छ । गत वर्ष अमेरिकामा चिनियाँले गरेको लगानीमा १९.२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको दाँजोमा १० प्रतिशत बढी भएको कुसम्यान एन्ड विकफिल्डको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अमेरिकाको व्यापारिक प्रयोजनको रियलइस्टेटमा भएको कुल लगानीको क्यानडाभन्दा पनि अगाडि देखिएको …
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको एफपिओ भर्न छुट्नु भयो कि, आज अन्तिम दिन !
March 19, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका0197
काठमाडौं, चैत ४ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड (Standard Chartered Bank Limited) को फर्दर पब्लिक अफरिङ (FPO) मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । बैंक (SCB) ले चैत १ देखि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता फर्दर पब्लिक …